Ukudalwa kweMaison Décotterd kubhiyozelwa liziko laseGlion leMfundo ePhakamileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukudalwa kweMaison Décotterd kubhiyozelwa liziko laseGlion leMfundo ePhakamileyo
Kwiinyanga ezintathu emva kokuba uStepane Décotterd ejoyine iZiko leMfundo ePhakamileyo i-Glion, i-Chef yamabhaso amaninzi kunye neziko eliphambili lolawulo lweendwendwe esikolweni lubhiyozela ukudalwa kuka-Maison Décotterd. IMaison Décotterd yindawo yokutya eneendawo ezintathu ezikhethekileyo kubandakanya indawo yokutyela yokutya eStéphane Décotterd ngombono wayo obabazekayo kwiGeneva Lake; i-Bistro ngu-Décotterd, i-chic brasserie; kunye neLounge Bar nguDeccotterd kunye nezitya zayo ezinencasa kunye nokukhethwa kwewayini kwiglasi.
Iindawo zokutyela ezimbini ezibalaseleyo, ezibekwe kwindawo eyayikade iyihotele i-Bellevue eGlion, zamkela umbono ophekiweyo weenkwenkwezi ezimbini waseMichelin uStepane Décotterd wombona wengingqi, ozinzileyo, kunye nokutya kwasekuqaleni. Ngokumalunga nefilosofi yakhe, ukhokela iqela lakhe ngophuculo oluqhubekayo, ebuyisela iikhowudi zesisu. U-Stéphane Décotterd uthi: "Cuisine yam ngokuqinisekileyo yeyommandla, izinzile kwaye yeyantlandlolo, kodwa ihlala iguquka, njengamanzi eli chibi endikhuthaza kakhulu."
Ukusukela ngo-2016, uStéphane Décotterd ubala kwi-brigade yakhe i-Pastry Chef uChristophe Loeffel, ophumelele amabhaso ka "Chef Pâtissier wonyaka ka-2021" wase Gault & Millau Switzerland kunye ne "Bronze Desserts 2020" kwitumente yesizwe sase-France esenzela iidayisi. Kutshanje uthathe inxaxheba kukhuphiswano lwe "Patissier des Jahres" eCologne, eJamani, wagqiba kwindawo yesibini. Umpheki omncinci othembisayo sele ephucule owakhe utyikityo, esebenza ngejometri, ubume, kunye nokulula. Ndihlala ndizama ukongeza umnxeba wokuqala kwaye ndibalisa ibali kunye neemveliso. Ndigxininisa ukubaluleka kokuqaqambisa inkcubeko endizifumana ndikuyo, ekusebenziseni iimveliso zommandla, ”kuphuhlisa uChristophe Loeffel.
Kwigumbi lokutyela, inkonzo iqinisekiswa nguStepphanie Décotterd, uMlawuli weMaison Décotterd, kunye neqela lakhe. Uhambisa inkonzo enezimbo zomzimba ezigqibeleleyo, ngelixa enendlela yobuqu, enika undwendwe amava angalibalekiyo. Ukuzinikezela kugqweso kunye nokuqiniseka, kuvumele uStepphanie ukuba aphumelele elona bhaso lokuqala laseMichelin laseSwitzerland lokubuka iindwendwe kunye nenkonzo, ngoFebruwari 2019.
Isithembiso sokugqwesa, uMaison Décotterd uyavuya ukuba yinxalenye ye Ukuhlaziya kunye neChâteaux umbutho, ukujoyina uthungelwano lweehotele kunye neeresityu ezizodwa ezingama-580 kwihlabathi liphela, ezingabanini nabasebenza ngoosomashishini abazimeleyo abanomdla kubugcisa babo kwaye bazimisele ngokunzulu ekwakheni ubudlelwane obufudumeleyo, obuhlala buhleli kunye neendwendwe zabo. Njengokutya kunye nefilosofi kaStéphane Décotterd, amalungu eRelais & Châteaux akhusela kwaye akhuthaze ubutyebi kunye nokwahluka kwezithethe zokupheka kunye nokwamkela iindwendwe, ukuqinisekisa ukuba ziyaqhubeka zichuma. Bazinikezele ngokulinganayo ekugcineni ilifa lemveli kunye nokusingqongileyo, njengoko kucacisiwe kumbono wombutho owanikezelwa kwi-UNESCO ngoNovemba 2014.
Abafundi baseGlion bazuza kakhulu ngokusekwa kweendawo ezimbini zokutyela kwiGlass campus, ukubanika amava amatsha okutyela kunye nethuba elikhethekileyo lokufunda kwiitalente ezizodwa zokupheka, ukuxhamla kuqeqesho olulodwa ekhitshini, kwinkonzo nakwibha. Kwangelo xesha, iikhampasi zaseSwitzerland zaseGlion zavuselelwa ukuqhubela phambili ukuphucula amava omfundi.